Global Voices teny Malagasy » Maty i Fitzroy Coleman, Ilay Trinidadiana Mpiangaly Gitara, ‘Andrarezin’ny Feo Ampiarahana’ (Zavamaneno Misy Tady) · Global Voices teny Malagasy » Print
Maty i Fitzroy Coleman, Ilay Trinidadiana Mpiangaly Gitara, ‘Andrarezin'ny Feo Ampiarahana’ (Zavamaneno Misy Tady)
Voadika ny 05 Aogositra 2016 4:21 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
“Ny andrarezina Fitzroy Coleman” — sarin'ilay lehibe amin'ny fitendrena mozika misy tady, nalain'i Robin Foster ary nahazoana alàlana. Tsy fantatra ny mpakasary niandohàny.
Very mpiangaly mozika andrarezina i Trinite sy Tobago — ny mpilalao gitara sangany, Fitzroy Coleman,  teo amin'ny faha-93 taonany — tamin'ny 26 Jolay 2016.
Nanana fomba  filalao manokana i Coleman ; izany angamba no iray amin'ireo talenta nahatonga ny haba-tranonkala DigitalDreamDoor.com  nametraka azy ho Laharana 93 ao amin'ny lisitry ny mpitendry gitara jazz mendrika indrindra manerantany, milahatra amin'ireo ngezalahy fanta-daza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, toa an-dry Wes Montgomery  sy Django Reinhardt .
Naparitak'ilay Trinidadiana injenieran'ny feo, Robin Foster, izay mahafantatra tsara an'i Coleman, ny sary maromaro sy lahatsarin'ireo fampisehoana nataon'ilay mpitendry gitara. Izy miaraka amin'i Mahalia Jackson  no iray amin'ireo, lahatsary noraketin'ny BBC tamin'ny fiandohan'ny taona 1960. Hoy izy  ao amin'ny Facebook :
Mandria Am-piadanana ry Fitzroy Coleman HBM. Ry ngezalahy mpitendry mozika misy ‘tady’ maneran-tany.
” Manampahaizana” i Coleman hoy i Foster tao amin'ny tafatafa an-telefaona — ary, toy ireo manampahaizana maro, dia ” lehilahy tena mampihetsi-po” izy, hoy ihany i Foster, mbola nampiany hoe lalina ny fiantraikan'ny tsy rariny tamin'i Coleman. Nohamafisin'i Foster fa indray mandeha dia nataon'ireo mpitendry gitara klasika malaza eran-tany, John Williams  sy Julian Bream,  hoe ” andrarezin'ny feo ampiarahana (zavamaneno misy tady) tamin'ny fotoana rehetra” i Coleman.
Tamin'ny fahatanorany, notadiavina mihitsy i Coleman hanao fampisehoana tamin'ireo hetsika sosialy ho an'ny “Iza no Iza” tany Trinite, ary hatramin'ireo miaramila amerikana izay nitoby tao amin'ny nosy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Mpitendry mozika nampiana-tena izy ary nandao an'i Trinite ho any Londona tamin'ny 1945 mba ho ao anatin'ny ‘tarika Karibeana iray’. Nanana fihaonana tsy tapaka  tamin'ny BBC niaraka tamin'ireo mpanan-talenta andrarezina toa an-dry Tony Bennett , Lena Horne , ary Eartha Kitt  sy ireo mpilalao ny mozika calypso toa an-dry Lord Kitchener  sy Roaring Lion  izy tany.
Dikan'ny pasipaoro efa lany datin'i Fitzory Coleman. Sary natolotr'i Robin Foster, nahazoana alàlana.
Tamin'ny fiverenany teto Trinite tamin'ny 1960, anefa, dia tsy mba ‘nokarakaraina’ i Coleman, ambaran'i Foster fa nahatsiaro natahotra noho ny fahambonian'ny fahaizany mozika ireo mpiara-miangaly aminy. ” Nanana iny mpitendry mozika sokajiana ho malaza erantany iny i Trinite”, hoy ny talahon'i Foster, ” ary tsy fantatry ny olona akory ny anarany.” Notsarovany ihany koa hoe tahaka ny ahoana ny mijery azy milalao :
Mahagaga ! Reny ao an-dohany ireo feo ampiarahana tsy hita ho tanterahana ary avy eo, tadiaviny izay fomba hitendrena azy. Tena manana fahaiza-mamorona izy raha resaka fanatsaràna feonkira. Indray mandeha nolazainy tamiko fa roa taona no laniny nanaovana feonkira iray tsy misy kilema — ary ankoatra ny filalaovany ireo feo mahafinaritra ampiarahana, dia afaka mitendry naoty toy ny fitetezana ny faritry ny feo ambany indrindra ampivadiana amin'ny feo ampiarahana izy– ary feheziny ao anaty feonkira izany rehetra izany. Hira 900 mahery no hainy tsianjery ary azony tendrena tsy misy diso.
Na dia neken'ny  fikambanan'ny mpanao Jazz-n'i Trinite sy Tobago aza i Coleman tamin'ny 2013, dia olona malaza tena tsy fantatry ny ao amin'ny firenena nahaterahany.
David Rudder, lehilahy malaza noho ny asany, mpitendry mozika calypso — izay nanome voninahitra an'i Coleman tamin'ny hira klasikanà mozika Calypso – ito nandefa ity fanavaozana sata Facebook teo am-pandrenesana ny fahafatesan'i Coleman ity :
Lasa i Fitzie. Tsy hitantsika intsony ny famirapiratany. Niditra sy nivoaka fotsiny tamin'ny tahirin-kirany isika. Mba olona manakory e!
Ho an'ny tahaka azy, aoka isika hanantena fa tena misy ny fiainana ankoatry ny fahafatesana mba hahazoan'ny rantsantanany mandihy indray mitety ny tahon'ny gitara. Mandria Am-piadanana ry Lehibe.
Mbola an-dàlam-pamitàna ny fandaminana ny fandevenana, tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra niaingàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/05/86318/
 Fitzroy Coleman,: http://www.socawarriors.net/forum/index.php?topic=29590.0
 mpitendry gitara jazz mendrika indrindra manerantany, : http://digitaldreamdoor.com/pages/best_jazz/best_jazzguitar.html
 Wes Montgomery: https://en.wikipedia.org/wiki/Wes_Montgomery
 Django Reinhardt: https://en.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
 sary : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154118081328859&set=a.53741983858.65399.556658858&type=3&theater
 Mahalia Jackson: https://www.facebook.com/robin.foster.121/videos/10154118044548859/
 Hoy izy : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154118037308859&set=a.53741983858.65399.556658858&type=3&theater
 John Williams: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Williams_(guitarist)
 Julian Bream,: https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Bream
 Tony Bennett: https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Bennett
 Lena Horne: https://en.wikipedia.org/wiki/Lena_Horne
 Eartha Kitt: https://en.wikipedia.org/wiki/Eartha_Kitt
 Lord Kitchener: https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_(calypsonian)
 Roaring Lion: https://en.wikipedia.org/wiki/Roaring_Lion
 olona malaza tena tsy fantatry : http://www.looptt.com/content/musicians-lament-lack-recognition-late-fitzroy-coleman
 mozika Calypso : https://www.youtube.com/watch?v=ntdu9PcC8dU
 ito nandefa ity fanavaozana sata Facebook : https://www.facebook.com/kingdavidrudder/photos/a.55564949373.62722.38518284373/10154478945414374/?type=3&theater